TOP NEWS: Mareykanka oo ogaaday halkii loo waday hubkii faransiiska uu qabtay – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Mareykanka oo ogaaday halkii loo waday hubkii faransiiska uu qabtay
by admin 31st March 2016 017
Doon ay saarnaayeen hub oo ay 20kii bishan ku qabteen ciidamada Faransiiska Badweynta Hindiya ayaa la sheegay in uu ka yimid dalka Iran kuna sii jeeday dalka Yemen gaar ahaan jabhada Xuutiyiinta.
Doontan oo ahayd tii labaad oo muddo bil gudaheed ah la qabtay ayaa markii hore loo malaynayay in loo waday dalka Soomaaliya oo weli ay saaran tahay cunoqabataynta hubka.
Afhayeenka ciidamada Maraykanka ee 5th Fleet Kevin Stephen ayaa u sheegay taleefishinka CNN in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in hubkan uu asalkiisu ka yimid dalka Iran ayna suurtogal tahay in loo waday xooggaga Xuutiyiinta ee dagaalka kula jira dowlada Yemen.
Horaantii bishan ayaa hub sidan oo kale ah waxaa lagu qabay xeebaha dalka Cumaan, waxayna dowlada Maraykanka ay sheegeen in hubkan ay soo dirty dowlada Iran loona waday dalka Yemen gaar ahaan ururka Xuutiyiinta balse la doonayay in la sii marsiiyo dalka Soomaaliya.
Sida uu sheegay Stephens shixnadan hubka ah ayaa ah tii saddexaad ee la qabto tan iyo bishii September 2015, iyadoo hubkana uu ka koobnaa boqolaal ah qoryaha fudud ee AK 47 iyo hubka lagula dagaalamo taangiyada.
Ciidamada badda ee dowlada Faransiiska ayaa ku arkay doontan hubka ku rarnaa Waqooyiga Badweynta Hindiya, ciidamadan ayaa waxaa ay ka mid yihiin ciidamo ilaalo ka ah badweynta Hindiya.
Muuqaal: Daawo Banaamijka Dareenka Shacabka Oo Looga hadlayo Heshiiskii Kismaayo
Faah Faahin: Maxaa ka soo kordhay Qaraxii ka dhacay Magalada galkacyo+ Sawiro
SAWIRRO:- Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha DFS oo kulan la qaatay Wafti ka socda Dalka Masar
Ahmed sudani 19th March 2018 19th March 2018
Indhacadde: “Imaaraadku wuxuu rabaa inuu dowladeena Somalia ula dhaqmo siduu doono”
Dhagayso:- Ilaalada Wasiir Xaglo Toosiye Oo Bili-ligaystay Xarunta Tvga Somali channel Ee Buuhoodle